ယောက်ျား တွေကို ကျဆုံးစေသော မိန်းကလေးတို့၏ အပြုအမူများ - MyanmarMagazine
ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ အတူပေါင်းသင်းတာက ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်သလို အနုပညာတစ်မျိုးဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပေါင်းသင်းရာမှာ ကိုယ့်ဘက်က တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ဘက်က တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် မလိုအပ်တဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်စောင်းတစ်ချက်၊ အပြုအမှုတချို့က ယောက်ျားတွေကို အံကြိတ်စေနိုင်ခဲ့တယ်။ သင်ရဲ့ အိမ်ကြီးရှင်မမှာ အောက်က ယေဘုယျအချက်တွေ ရှိပါသလား?
(၁) ချိန်းတွေ့ချိန် တမင်နောက်ကျခြင်း
“ချိန်းတွေ့ချိန် နောက်ကျခြင်းအနုပညာ”ကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး မိန်းကလေးတွေ နှစ်သက်ခဲ့မှန်းမသိပါဘူး။ ယောက်ျားလေးရဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်မှုအပေါ် လိုက်ပြီး ချိန်းထားချိန်နဲ့ (၅)မိနစ်၊ (၁ဝ)မိနစ်ထိ တချို့က ဒီထက်ပိုနောက်ကျတတ်ကြပြီး ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့ ယောက်ျားလေးရဲ့ခံစားချက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ကြတယ်။
ယောက်ျားလေး စိုးရိမ်တဲ့အထိ၊ စိတ်ပူတဲ့အထိ ပြီးတော့ စိတ်တိုတဲ့အထိ စောင့်ခိုင်းစေပြီး “နောက်တစ်ကြိမ် ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့”လို့ ကိုယ့်ကို အသံမာနဲ့ သူအော်ငေါက်ခဲ့ရင် နောက်တစ်ကြိမ် ချိန်းတဲ့အခါ မသွားဘဲ နေလိုက်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးအများစုက အောင့်အီးသည်းခံပြီး အပြုံးမျက်နှာနဲ့ “ကိစ္စမရှိဘူး.. ကိုယ်လဲအခုမှရောက်တယ်”လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ စောင့်နေရင်းက ဆေးလိပ်တစ်ထုပ်ကို စိတ်တိုတိုနဲ့အားရပါးရ သူသောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။
(၂) တကယ်လို့ ကျွန်မနဲ့ရှင့်မေမေ ရေချောင်းထဲကျသွားရင် ရှင်ဘယ်သူ့ကိုအရင်ကယ်မှာလဲ?
ဒါဟာ ရှေးအရမ်းကျတဲ့ ခပ်တုံးတုံး ရွေးချယ်မှုပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ ဒီပုစ္ဆာက လူမဆန်တဲ့အပြင် စိတ်ကြည်နူးစရာလည်း မကောင်းပါဘူး။ ယောက်ျားလေးအတွက် အင်မတန်ရက်စက်တဲ့၊ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာတဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ယောက်ျားလေးကို ချောက်ထဲတွန်းချတာနဲ့ မခြားပါဘူး။
မိန်းကလေးတို့၏ အပြုအမူများ(၃) “ကျွန်မကိုချစ်လား?” “ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ?”
ဒီလိုအမေးတွေကို တစ်နေ့ (n)အကြိမ်မြောက်မေးရလည်း မိန်းကလေးတွေက မငြီးငွေ့တတ်ကြဘူး။ တကယ်လို့ ယောက်ျားလေးသာ စိတ်မရှည်ဘဲဖြေခဲ့မိရင် ငါ့ကိုအလေးမထားဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ယောက်ျားလေးဆီကနေ ဂတိ၊ သစ္စာတွေကို တောင်းခံတတ်တယ်။ မိန်းကလေးတွေထက်စာရင် ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ခံစားချက်နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးက သိပ်ဆက်သွယ်မထားဘူး။ ဒါကြောင့် “နင့်ကိုငါချစ်တယ်”ဆိုတဲ့စကားကို သူတို့အလွယ်တကူ မပြောတတ်ကြဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ ယောက်ျားလေးတွေက သူတို့ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိစ္စတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနေတာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
(၄) ငိုတယ်၊ ရစ်တယ် ပြီးရင်လမ်းခွဲမယ်
ငိုတာကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ငိုတယ်ဆိုတာ မိန်းမသားတွေရဲ့မူပိုင်မို့ လှပပါတယ်။ ရစ်တာက ခေါင်းခြောက်စရာဆိုပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “လမ်းခွဲမယ်” ဆိုတဲ့စကားက အကျည်းတန်ဆုံးဖြစ်တယ်။ မိန်းကလေးတချို့က ဓားထက်ထက်သွေးပြီး အစိမ်းသက်သက် ခုတ်ဖြတ်မယ်ပုံစံနဲ့ “သရုပ်အတုဆောင်”ပြီး ယောက်ျားလေးကို ခြိမ်းခြောက်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေပေးတဲ့ စိတ်ဖိအားကို မခံနိုင်တဲ့ တချို့ယောက်ျားလေးတွေက တကယ်လမ်းခွဲလိုက်တတ်တယ်။
(၅) “Shakiraကို ကြိုက်လား?”
မိန်းကလေးတချို့က ဒီလိုအမေးမျိုးမေးပြီး ယောက်ျားလေးဖြေမယ့်အဖြေကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်နေတတ်တယ်။ တကယ်တော့ အများအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေဆီက “ပြီးပြည့်စုံတဲ့အဖြေ”ကိုပဲကြားချင်ပြီး “တကယ့် ရင်ထဲကလာတဲ့အဖြေ”ကို ကြားချင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုအမေးက ယောက်ျားလေးတွေကို အဖြေရကြပ်စေတယ်။ တခြားမိန်းကလေးတွေကို မကြည့်ရှု၊ မခံစားတတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ယောက်ျားအများစုက မိန်းကလေးတွေကို ငေးမောပြီး စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြတယ်။ ဒီသဘောကို နားလည်ခဲ့ရင် ကျားတစ်ကောင်ကို အတင်းအဓမ္မ ကြောင်လုပ်ခိုင်းပြီး ကြွက်ဖမ်းခိုင်းဖို့ မသင့်ပါဘူး။
(၆) သူငယ်ချင်းက အရေးကြီးတာလား? ကျွန်မကအရေးကြီးတာလား?
ချစ်သူရှိပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေမှာ လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးကုန်တယ်။ တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံပျော်ပါးပြီး ချစ်သူကောင်မလေးအိမ်ကိုမီးချောင်းလဲဖို့အရောက်နောက်ကျခဲ့ရင် ဒါဟာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲတာထက် ပိုပြင်းထန်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ မိဘတွေရှေ့ မျက်နှာလုပ်ပြီး ကျွန်မကိုသာ “တစ်,နေရာ”မှာထားကြောင်း သူပြသချင်လိုဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကို သူအလေးပေးသလို သူ့မှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေလိုကြောင်း မိန်းကလေးတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။ သူ့ကိုသီးသန့်ခွဲပြီး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခွဲထားခဲ့ရင် သူ့အတွက် အိမ်ထောင်ဆိုတာ ထောင်နဲ့မခြားတော့ပါဘူး။
တချို့မိန်းကလေးက ကြွားဝါပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ် ပြင်းကြတယ်။ လက်ထပ်ချိန် သူ့ဘက်က အဆင်ပြေ၊ မပြေမသိဘဲ “စိန်လက်စွပ်”မပါရင် မရဘူးဆိုပြီး ယောက်ျားလေးတွေကို ဖိအားပေးတတ်တယ်။ လက်မထပ်မီ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျစိတ်က ယောက်ျားလေးတွေကို အဝေးထွက်ပြေးချင်စိတ် ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အချစ်ကို ဂုဏ်ပကာသနတွေနဲ့ ဝင့်ကြွားသက်သေပြစရာ မလိုပါဘူး။ မှီနိုင်တဲ့ယောက်ျား၊ ပွေ့ဖက်နိုင်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
(၈) လူပုံအလည်မှာ သွန်သင်ပြီး စားပွဲခုံအောက်ကနေ ခြေထိုးတတ်သူ
ယောက်ျားလေးတွေက မျက်နှာသာပေးတာကို လိုချင်ကြတယ်။ ဇနီးချောလေး ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ သတင်းမွှေးပြီး လူပုံအလည်မှာ အဲဒီဇနီးချောရဲ့ အဆုံးအမကိုခံရမှာ ယောက်ျားလေးတွေ အကြောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့အရှိုက်ကိုထိစေပြီး မယားကြောက်လို့ အရှက်ရစေပါတယ်။ မယားကြောက်သူတစ်ယောက်မှာ ဘာလေးစားမှု၊ ဘာဂုဏ်ယူစရာတွေ ရှိနိုင်ဦးမလဲ?
(၉) ယောက္ခမကို မျက်နှာသေပြသူ
ယောက်ျားလေးတွေ အကြောက်ဆုံးက ယောက္ခမနဲ့ချွေးမ မတည့်တာပဲဖြစ်တယ်။ မိန်းမသားနှစ်ယောက်ရဲ့ စစ်ပွဲမှာ နောက်ဆုံးဗုံးထိခံရသူက သူပဲဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ ယောက္ခမနဲ့ချွေးမ မတည့်ခဲ့ရင် ပြဿနာတွေက အလိုလိုနေရင်း ပေါ်နေတတ်တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ယောက်ျားလေးက ငရဲရောက်နေတတ်တယ်။
(၁ဝ) ဖုန်းစစ်ဆေးသူ၊ အိတ်ကပ်နှိုက်သူ
ယောက်ျားလေးရဲ့ဖုန်းကို စစ်တတ်သူက သူ့ရဲ့”နေ့စဉ်ဘဝကို” သတိထားသူဖြစ်ပြီး အိတ်ကပ်နှိုက်သူက သူ့ရဲ့ “ငွေဝင်ငွေထွက်”ကို စစ်ဆေးသူဖြစ်တယ်။ တစ်နေရာမှာ “ဘဏ်”အသေးစား ရှိနေမလား? ထိမ်ချန်ပြီး စာရင်းပြသလား? ဝင်ငွေကိုလျော့ပြသလား? စတဲ့ “မယုံကြည်မှု”တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမိသားစုမှာ ဦးဆောင်ရတဲ့ယောက်ျားတွေက တကယ်ပဲဖိအားများပြီး ပင်ပန်းရပါတယ်။ အမှားတွေ အလွယ်တကူ လုပ်မိတတ်ပါတယ်။
(၁၁) ဘေးအိမ်က ကားအသစ်လဲပြီတဲ့!
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဒီလို လိုအင်တပ်မက်မှုတွေက ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဦးနှောက်ခြောက်စေသလို သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ဝင်စေပါတယ်။ ကိုယ့်တပ်မက်စိတ်ရဲ့ ဖိအားကြောင့် ယောက်ျားတချို့ကသည်းမခံနိုင်ဘဲ”ဘေးအိမ်ကမိန်းမအသစ်လဲပြီ”တဲ့လို့ ပြောထွက်
တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ မိန်းမက သူ့ဝင်ငွေနည်းတာကို လှောင်ပြောင်ပြီး သူ့ဝင်ငွေနဲ့ မိသားစုတန်ဖိုးကို ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်လို့ သူထင်တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့အသုံးမကျမှုကို မထေမဲ့မြင်လုပ်နေတာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်တယ်။
မိသားစုတာဝန်၊ အိမ်ထောင်တာဝန်တွေနဲ့ ဖိအားများလွန်းပေမယ့် ယောက်ျားတွေက အလွယ်တကူ မညည်းညူတတ်ကြဘူး။ ဆင်းရဲပင်ပန်းပေမယ့် မျက်နှာက အလွယ်တကူ မညိုးကျတတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့အကြောတစ်ချောင်းဆွဲနှုတ်လိုက်တာတောင်မှ ယောက်ျားတွေကကြံ့ကြံ့ခံ
ဟန်ဆောင်နိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်း၊ အပြုအမှုတစ်ခု၊ မတော်တဆ ထိခိုက်နာကျင်မှုတစ်ခုက သူ့တို့ဘဝကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ခဲ့တယ်။ ယောက်ျားတွေထက် မိန်းမတွေပိုအသက်ရှည်တာက ဒီသဘောတရားပဲဖြစ်တယ်။ မိန်းမမြတ်တစ်ယောက်က ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ထွက်လမ်းလေးပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို ပိုလိုအပ်ခဲ့ကြတယ်။